トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Twin Seoul nesigaba esigabeni lwesikhombisa "ngokuvumelana (Reunion)" kuyinto
oke [3500 yen asihlole Mahhala] ukuze izangoma, abantu ababili abafunga ukuthi kunyuke eyabo nomunye ukuba banqobe eziyisithupha umphefumulo lomthala esigabeni engena Awakening ongokomoya, omkhulu kufikile ukuthola umuzwa injabulo zihambisana amandla. Futhi kuyinto esigabeni lwesikhombisa lokugcina wamukelekile.
ukubambisana kuphela, ababili eqala ukuthululela uthando olungenamkhawulo futhi emhlabeni, ayikho into kakade scary. Uma usufinyelela kulesi sigaba, nomunye bacela nomunye obunqoba ukuzazisa, uyofuna sibonane ngemva kwesikhathi eside.
ngalesi sigaba, umuntu eba nguye beyofuna enye inhlangano, ungaziqhenya ukuthi uyaphila ukuze ngokuvumelana. Khona-ke, ngenkolelo yokuthi bethandana alintengi, ukuthi Sarakedase iqiniso yendlela engibukeka ukulahla ukuzazisa.
2 abantu amandla wathela uthando olungenamkhawulo ebantwaneni umphefumulo amabili ambient e
? Aer olungenamkhawulo inikezwe ubuhlobo uthando ukuthi emhlabeni bajabule, bonke ukuthethelela futhi babe, ezimbili umphefumulo kubangela resonance, kufanele ukwazi ukuheha futhi. Futhi uma usuphinda udlala sihlangane, sinobuhlobo ukuthi ungakwazi sigqoke ukunikeza uthando kwelase enye inhlangano.
sikhathi, waqaphela ukuthi ubuhlobo babo ungumphefumulo twin is engcwele iye okwalethwa Nkulunkulu, siyaqaphela ukuthi kukhona izibopho eziqinile. Lokho-ke usufinyelele leli qophelo, uzoba konke uNkulunkulu futhi yonke nibusisiwe. Khona-ke, izinto ezihlukahlukene, abantu ababili is injabulo unikezwa, ungaziqhenya okuhamba phambili kwe-injabulo.
? Akukhona nje abaphikisi kuyinto
twin Seoul futhi emhlabeni kubantu sibonge futhi singakhethi, abantu ababili ukuthi sekuyinto kungenzeka bathande ngobuqotho phakathi kwabantu, uthando futhi emhlabeni hhayi kuphela nomunye kuyoba uthele ngesandla esivulekile. Kukhona, ukudweba uma abantu ababili Kufanele ukubonga sicitsekela zonke Qondanisa lapho ngamtshela khona emhlabeni. Futhi jabula emhlabeni, ezimbili injabulo kuyoba umvuthwandaba. Lokho kusho
, akusho ukuthi esinganqobeki ku uya manje siphile, bazovakashela ezihlukahlukene kunzima. Nokho, basekelane nomunye amandla uthando nabantu ababili, futhi ungakwazi futhi ukuthola ukuxhaswa kubantu ababezizungezile, kufanele Ikeru futhi unqobe izenzakalo nzima.
Ngakho imiphefumulo ezimbili kugujwa isinyathelo wesikhombisa zikhonza njengezigqila _X000D_ esigabeni sokugcina aligcwali, iwele Seoul kudlalwa obunobunye bakwazi ukuqedela imiphefumulo umzimba ukufinyelela ezingokomoya esiteji eliphezulu kakhulu Xiang. Futhi omunye kwesigamu umphefumulo esiye ebheka phezulu manje, angeza kuyiqiniso ukuze ekugcineni kungaholela.
ukuza lapha, kumelwe zidlule kovivinyo. Umgwaqo akuyona nganoma iyiphi indlela flat, nani kumelwe waba munyu. Nokho, lolu hlobo ucabanga ukuthi inqubo kuze kube nomunye ukubingelela izibopho Okuy?nqo, likhiphe ngesikhathi wena kwelinye kusenjalo, kubalulekile ukuya ukuxubha umphefumulo wakho.
Kunalokho, kumelwe futhi waba munyu. Nokho, lolu hlobo ucabanga ukuthi inqubo kuze kube nomunye ukubingelela izibopho Okuy?nqo, likhiphe ngesikhathi wena kwelinye kusenjalo, kubalulekile ukuya ukuxubha umphefumulo wakho.